ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ဟာဝိုင်ယီကျွန်း – သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်အတူ Visting
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 16 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
ထို Continental ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်မဟုတ်စဉ်ဟာဝိုင်ယီကျွန်းတစ်ဦးခွေးရူးပြန်ရောဂါအခမဲ့ State က, သူတို့ Quarantine သို့သွားလေ၏မဟုတ်လျှင်ထို့ကြောင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဟာဝိုင်ယီသို့ခွင့်ပြုရကြပြီမဟုတ်.
ထိုကျွန်းများမှဧည့်သည်များတစ်လျှောက်သူတို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ဆောင်ကြဉ်းနိုင်အောင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်များကိုခရီးသွားလာခြင်း၏အရေးပါမှုကိုအသိအမှတ်ပြုဟာဝိုင်ယီကျွန်းဥပဒေပြုလွှတ်တော်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပြောင်းလဲစေ. လောလောဆယ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသာခွေးများရန်လျှောက်ထား & ကြောင်.
တောင်မှသူတို့ကလွယ်ကူမဖန်ဆင်းခဲ့ကြပြီးအကစျေးကြီးသည်ထင်, စနစ်တကျကြိုတင်ပြင်ဆင်လျှင်သူတို့ကိုချက်ချင်း Honolulu လေဆိပ်ရောက်တာနဲ့အပေါ်သို့သင့်အားသင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လွှတ်မည်ဟု.
အဆင့်တစ် – တိရိစ္ဆာန်ဆရာလက်မှတ်ကို – မူရင်းဖြစ်ရမည် – အဘယ်သူမျှမစောင်. ဒီလက်မှတ်ထက်မပိုသင့်တိရိစ္ဆာန်ဆရာကထုတ်ပေးရပါမည် 14 ကြိုတင်ဟာဝိုင်ယီကျွန်း၌သင်တို့၏ဆိုက်ရောက်ရက်.
ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း: အဆိုပါအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခွေးရူးပြန်ရောဂါ၎င်း၏တသက်တာမှာအနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးခဲ့ကြရသူတွေကိုကာကွယ်ဆေးထက်ပိုမိုဖြစ်ရမည် 90 ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်လက်ထက်. ထိုကာကွယ်ဆေးကိုတစ်နှစ်လိုင်စင်ခဲ့လျှင်နောက်ဆုံးပေါ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထက်မပိုပြုပါပြီရမယ် 12 ကြိုတင်ဟာဝိုင်ယီကျွန်းရှိအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရဲ့ဆိုက်ရောက်လ. ကာကွယ်ဆေး 3-တစ်နှစ်လိုင်စင်ခဲ့လျှင်နောက်ဆုံးပေါ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထက်မပိုပြုပါပြီရမယ် 18 ဟာဝိုင်ယီကျွန်းတွင်ကြိုတင်ဆိုက်ရောက်လ. တစ်ခုခုကိစ္စများတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထက်မပိုပြုပါပြီရမယ် 90 ကြိုတင်ဟာဝိုင်ယီကျွန်းတွင်ဆိုက်ရောက်ရက်.
သင့်ရဲ့တိရိစ္ဆာန်ဆရာထံမှလက်မှတ်အများဆုံးမကြာသေးခင်ကာကွယ်ဆေးထိုးရက်စွဲဖော်ပြရပါမည်, နှင့်ယခင်ကာကွယ်ဆေးထိုးသည့်ရက်စွဲ. အဆိုပါလက်မှတ်ကိုကာကွယ်ဆေးအမည်ကိုညွှန်ပြရမယ်, အများကြီးသို့မဟုတ်အမှတ်စဉ်နံပါတ်, အာနိသင်တိုးမြှင့်ကြားကာလ, ကာကွယ်ဆေးထိုးသည့်ရက်စွဲ, သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲနှင့်ကတစ်ဦးသို့မဟုတ်သုံးနှစ်တွင်ခွင့်လိုင်စင်အမျိုးအစားခဲ့သည်ဖြစ်စေ.
ကောင်းမွန်သောကျန်းမာရေး: အဆိုပါလက်မှတ်ကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သည်နှင့်က tick မထက်ပိုကုသခဲ့သည်ကြောင်းကိုဖော်ပြရပါမည် 14 ကြိုတင်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း Fibronil သို့မဟုတ်တစ်ခုနှင့်ညီမျှရေရှည်တည်တံ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဟာဝိုင်ယီကျွန်းတွင်ဆိုက်ရောက်ရက်. ကုသမှုရဲ့နေ့စွဲနဲ့အသုံးပြုတဲ့ထုတ်ကုန်လက်မှတ်ပေါ်တွင်ညွှန်ပြ.
အဆင့်နှစ် – Microchip သင့်ရဲ့တိရိစ္ဆာန်ဆရာထံမှလက်မှတ် microchip များ၏အရေအတွက်ကိုဖော်ပြရမည်ဖြစ်ပြီးထိုသို့တိရိစ္ဆာန်ဆရာကိုအောင်မြင်စွာ chip ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဆံ့ရမယ်.
အဆိုပါ chip ကိုအဆင့်အတန်းကိုအမေရိကန်ကိစ္စကိုဖြစ်ရမည် (Avid) သို့မဟုတ် (မူလစာမျက်နှာတနည်း) ပုံစံ. အဆိုပါ microchip မတိုင်မီအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏အသွေးကိုစမ်းသပ်ဖို့ကိုစိုက်ထားရပါမည်.
အဆင့်သုံး – OIE-FAVN ခွေးရူးပြန်ရောဂါသွေးစစ်စာမေးပွဲ သင်တို့သည်စုံစမ်း၏ရလဒ်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သို့မဟုတ် 0.5IU / ml နဲ့တန်းတူခဲ့ဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အတည်ပြုဓာတ်ခွဲခန်းကနေလက်မှတ်ရှိရမည်. အဆိုပါလက်မှတ်ကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ microchip အရေအတွက်ပြရမယ်. သွေးစစ်ဆေးမှုထက်မပိုပြုရပါမည် 18 ထက်လနှင့်မလျော့နည်း 120 ကြိုတင်ဟာဝိုင်ယီကျွန်းတွင်ဆိုက်ရောက်ရက်.
သင့်ရဲ့တိရိစ္ဆာန်ဆရာသင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကနေသွေးနမူနာ ယူ. ထိုသို့တင်ပို့ရမယ်:
တွင် Kansas ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်
180 Denison ရိပ်သာလမ်း
Mosier Hall က
Kansas ပြည်နယ် 66506-5600
အဆင့်လေး – Application ကိုဤစာရွက်စာတမ်းများ၏မူရင်း Send – အဘယ်သူမျှမစောင်မှ:
တိရစာန် Quarantine ဘဏ်ခွဲ
99-951 Halawa ချိုင့် Street,
Aiea, ဟာဝိုင်ယီကျွန်း 96701
ပမာဏကိုတစ်ဦးငွေကိုင်က check သို့မဟုတ်ငွေအမိန့်ခံ့ $165.00 အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်.
အဆိုပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်စစ်ဆေးမှုများရောက်လာရပါမည် 10 အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရဲ့ဆိုက်ရောက်မီလက်ထက်. စာရွက်စာတမ်းများထက် ပို. သင့်တိရိစ္ဆာန်ဆရာကပြင်ဆင်မရနိုင်ပါကတည်းက 14 ကြိုတင်သင်တို့အားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏လေဆိပ်လွှတ်ပေးရန်အရည်အချင်းပြည့်မှီမှ Federal Express အားဖြင့်သူတို့ကိုပေးပို့ရပါမည်ဆိုက်ရောက်ရက်.
အဆင့်ငါးခု – ရောက်လာခြင်း သင်သည်သာ Honolulu အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အားဖြင့်ဟာဝိုင်ယီကျွန်း ဝင်. သာ၏နာရီအကြားစေခြင်းငှါ 8 ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်9ညနေ. သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မှာတည်ရှိပြီး Quarantine အလယ်ဗဟိုမှလေဆိပ်ကနေယူကြလိမ့်မည် 99-951 Halawa ချိုင့်လမ်းမကြီး, Aiea, ဟာဝိုင်ယီကျွန်း 96701 – တယ်လီဖုန်း 808 483-7151.